Rodobe 27 okt : samia mailo isika
Nitondra fanazavana mikasika ny fanakianan'ny olona azy ny Depiote Leriva Manahirana voafidy tany Brickaville. Nisy hoy izy nilaza fa inona no mahasamihafa anareo sy Méme satria samy hiditra ao anaty rafitra kanefa i Dada mbola tsy tonga. Tamin'iny hoy ity olomboafidy ity dia ry zareo no niditra tsy nahazo alalana tany, fa amin'izao fotoana izao dia baiko avy amin'i Dada ny hoe midira ao anaty rafitra. Raha tsy manao izay isika hoy izy dia mandà ny tenin'ny Filoha Ravalomanana. Mba tsy hifamitahana eto hoy hatrany ny Depiote Leriva dia tsara ny manazava fa tsy anjaranao, tsy anjarako, tsy anjaran'ny mpitarika ny mamerina ny Filoha Ravalomanana eto Madagasikara. Ny antony dia mazava fa fanapahan-kevitra manokana raisiny ny fotoana sy ny ora hahatongavany eto. Ny andraikintsika hoy izy dia ny manomana ny fitsenana azy sy miaro azy.
Matoa avy amin'ny ankolafy telo ny Praiministra hoy Andriamatoa Raveloson Constant dia tsotra ny antony. Tsy maintsy misy hoy izy ny « contre poids » na setri-pahefana. Tsy azo atao mihitsy ny hoe mpanongam-panjakana no sady filoha no hahazo ny Praiministra. Nambarany ihany koa fa tsy misy an'izany fitsabahana ataon'ny Afrikana Tatsimo izany, fa resaka ka atao. Tsotra noho izany hoy izy dia telo taona nanao ianareo kanefa tsy nahavita. Anisan'ny mosavy ataon'ny sasany antsika hoy Andriamatoa Raveloson dia ny fandrangitan'i Camille Vital ny miaramila, milaza hoe atao tsinontsinona isika miaramila.